Wasiirka Arrimaha Gudaha Finland Oo la Kulantay Wasiirka Dib u dejinta Somaliland | Salaan Media
Wasiirka Arrimaha Gudaha Finland Oo la Kulantay Wasiirka Dib u dejinta Somaliland
Finland (SM)- Wasiirka Arimaha gudaha ee dalka Finland Mrs Päivi Räsänen oo ay shalay la kulantay weftigii uu hogaaminayey Wasiirka Dib-udejinta Somaliland Md. Saleban Ciise Axmed (Xaglo-toosiye) ee socdaalka shaqo ku joogay maalmihii la soo dhaafay magaalada Helisinki ee dalka Finland.
Sidaasna waxa lagu sheegay war uu Finland nooga soo diray Maxamed Xasan Mataan oo ah suxufi madax banaan. “Kulankan oo ahaa mid rasmiya oo ay kuwada kulmeen Weftigi uu hogaaminayey Wasiirka Wasaarada Dib-udejinta Somaliland Md Saleban Esse Ahmed. Iyo Wasiirka Wasaarada arimaha gudaha ee Finland iyo madax kale oo kasocotay wasaarada arimaha gudaha ee dalkan Finland.
Wasiirada Wasaarada arimaha Gudaha ee Finland Mrs päivi räsänen ayaa si heer sare ah usoo dhawaysay Wasiir Saleban iyo weftigiisaba, tilmaantayna inay ku faraxsanyihiin ka wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba inay kulan noocan oo kale ah yeeshaan maanta Wefti kasocda dawlada Somaliland.
Labada Wasiir ayaa faalo ka bixiyey labaduba mid walbaa dhankiisa iyo dawlada uu ka tirsanyahay sida ay diyaarka ugu yihiin inay sameeyaan xidhiidh wanaagsan oo dhex mara laba wadan, iyagoo xusay mandaqada geeska afrika ee ay ku taal Somaliland in-loo baahanyahay inlayska kaashado waxyaabo badan oo khuseeya dhinacyada Nabadgalyada, Horumarka, Budhcad-badeeda, Ladagaalanka argagixisada iyo waxyabaha lamidka ah.
Wasiirka Wasaarada dib-udejinta Somaliland Md Saleban Esse Ahmed ayaa xusay in dawlada Somaliland ay ubaahantahay kaalmo dhanwalba ah, iyo inay dawlada FINLAND wixi ay ka gaysan karto horumarka dalka Somaliland ay ka qayb qaataan.
halka dhanka kale aysoo dhawaysay Wasiirada Wasaarada arimaha gudaha ee Finland is-kaashi dhex-mara labada dawladood.
Weftiga kasocda dawlada Somaliland ee maalmihi ugu danbeeyey ku sugnaa dalka Finland ayaa waxay la-kulmeen qaybo badan oo kamid ah madaxda dalkan Finland. Sida Siminaar balaadhan oo ay shalay kasoo qayb galeen, madax kasocota laanta socdaalka dalka FINLAND, Madaxda IOM Finland Iyo Norwey, qaar kamid ah Madaxda Booliiska Wadankan Finland, Iyo Kulankan ay la kulmeen Wasiirada Wasaarada arimaha gudaha. Mrs päivi räsänen
iyadoo weli ay uqorshaysanyihiin inay lakulmaan Wasaarada arimaha dibeda ee dalkan Finland iyo Gudoomiyaha baarlamaanka.
Kulamadan ayaa intii uqabsoontay weftiga kasocday Somaliland gabi ahaantood waxay ugu dhamaadeen is-afgarad wanaagsan.”